Semalt: SEO सामग्रीमा चोरी र यसको प्रभावलाई कसरी हटाउने
यदि सामग्री राजा हो भने, प्रतिलिपि गरिएको सामग्री श्राप हो।
यो त्यस्तो खतरा हो जुन हामी मध्ये धेरैले हाम्रो मार्केटिंग जीवन भर अनुभव गरेका छौं। यो हरेक दिन उत्पादन र वेबमा प्रकाशित भइरहेको सामग्रीको विशाल मात्रामा दोष दिनुहोस्। वा स्प्यामरहरूमा जसले चोरी सामग्रीको वरपर उपकरण र वेबसाइटहरू बनाउँछन्। कारण जेसुकै होस्, प्रतिलिपि गरिएको सामग्री आज डिजिटल मार्केटिंगमा ठूलो समस्या हो।
एसईओ मा चोरी साहित्य कपिराइट समस्याहरु आमन्त्रित गर्न सक्छ, तर यो केवल तपाइँको वेबसाइट को खोज इंजिन द्वारा दण्डित पनी को लागी दोस्रो आउँछ। धेरै जसो केसहरूमा, यो कोही त्यस्तो व्यक्ति हुनेछ जसले तपाईंको सामग्री प्रतिलिपि गर्दैछ तर नतीजा तपाईंको वेबसाइटमा SERP श्रेणीकरणमा ड्रप मार्फत महसुस हुन्छ। यो उचित छैन र यसलाई सच्याउन आवश्यक छ।
Semalt तपाईं एसईओ मा साहित्य चोरी र यसलाई बेवास्ता गर्न को लागी केहि महान तरिका मा एक स्टार्टर गाइड ल्याउँछ। हाम्रा पूर्ण-स्ट्याक सेवाहरू मार्फत - AutoSEO र FullSEO - हामीसँग छ हजारौं व्यवसायहरुलाई सहयोग गर्‍यो तिनीहरूको सामग्री आउटपुटको प्रामाणिकता कायम राख्नुहोस्। हामी यस लेखमा हाम्रा केही कार्यनीतिहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौं। मा पढ्नुहोस्
वेब सामग्री मा चोरी हो के हो?
साहित्यिक चोरी भनेको यसको सबैभन्दा आधारभूत अर्थमा यसको मतलब बिना अर्को वेबसाइट वा स्रोतबाट सामग्रीका सम्पूर्ण ब्लकहरू orrowण लिनु हो र त्यसलाई आफ्नै आफ्नै रूपमा प्रकाशित गर्नु हो। उदाहरण को लागी, जब टोरोन्टो, क्यानाडा मा आधारित एक रियल इस्टेट वेबसाइट एक अमेरिकी रियल्टी कम्पनी को स्वामित्व वाली एक वेबसाइट मा प्रकाशित केहि वाक्यहरु प्रयोग गर्दछ र यसको आफ्नै लेख को एक हिस्सा को रूप मा प्रकाशित, यो प्रतिलिपि सामग्री मा राशि हुन सक्छ।
यो समस्यामा परिणत हुन्छ किनकि अब त्यहाँ समान सामग्रीको दुई संस्करणहरू छन्, जसले एसईओ दृष्टिकोणबाट दुई आलोचनात्मक चीजहरू निम्त्याउँछ:
नक्कल सामग्री खोज ईन्जिन माकुरा द्वारा क्यास गरिएको छ
यी दुई मुख्य कारणहरू हुन् किन खोजी ईन्जिनहरूले प्रतिलिपि गरिएको सामग्रीलाई घृणा गर्छन्। होइन किनकि उनीहरूले समान प्रकारको सामग्री क्यास गर्नुपर्दछ, तर किनभने यसले प्रयोगकर्ताको अनुभवलाई असर गर्छ। दुई समान वेबपेजहरू SERPs मा एक भन्दा माथि दर्जा एक प्रयोगकर्ताको लागि राम्रो अनुभव होईन। प्रयोगकर्तालाई उनीहरूले खोजेको सहि जानकारी फेला पार्न मद्दत गर्नु खोजी ईन्जिनहरूका लागि शीर्ष प्राथमिकता हो, र प्रतिलिपि गरिएको सामग्रीले त्यो अनुभवमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ।
फिगर १ - संक्षेपमा चोरी। छवि क्रेडिट: विकिपेडिया
साहित्य चोरी पनि संसारको धेरैजसो भागहरूमा एक नागरिक अपराध हो। प्रकाशन र डॉक्टरेट क्षेत्रहरुमा अधिक प्रासंगिक, यसले कपीराइट उल्लंघन र बौद्धिक अधिकार सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न सक्छ। अमेरिकामा, उदाहरणका लागि, प्रतिलिपि अधिकार मुद्दाहरू गम्भीर छन् र यदि तपाईंले आफूलाई कानुनी मुद्दाको बीचमा भेट्नुभयो भने, नतीजा धेरै गम्भीर हुन सक्छ।
एसईओ को बारेमा उही भन्न सकिदैन। तर प्रतिलिपि गरिएको सामग्री अझै सिफारिस गरिएको छैन किनकि यसले SERPs मा चाहिने शीर्ष स्थिति प्राप्त गर्ने तपाईंको सम्भावनाहरूलाई कम गर्दछ। Semalt मा, हामीले वेबसाइटहरूमा नक्कल गरिएको सामग्रीहरूको असंख्य उदाहरणहरू देख्यौं जुन हाम्रो ग्राहकहरूको वेबसाइटहरूबाट लिइएको छ। हामीले उनीहरूको सफलताका साथ कम गर्न सक्रियतापूर्वक प्रयास गरेका छौं। धेरै जसो तल अनौंठो सामग्री सिर्जना गर्न आउँदछ जुन तपाईंको लक्षित दर्शकहरूको लागि मूल्यवान हुनेछ।
तर हामी नक्कल सामग्रीको मुद्दा कसरी सुल्झाउने भनेर बुझ्नुभन्दा पहिले, यसको एसईओलाई कसरी असर गर्छ भन्ने बारेमा पहिले गहिरो हेरौं।
तपाईंको वेबसाइटको एसईओमा चोरीको प्रभाव
धेरै बजारहरू विश्वास गर्छन् कि प्रतिलिपि गरिएको सामग्रीको साना पाठहरूले पनि तिनीहरूलाई जैविक खोजीमा हानि गर्न सक्दछ। यो खोज ईन्जिनले जस्तो निर्दिष्ट गरिएको जस्तो छैन गूगल। खोजी ईन्जिनहरूले मात्र तपाईंलाई दण्डित गर्छ यदि उनीहरूले पत्ता लगाए कि प्रतिलिपि गरिएको सामग्री प्रकाशित गर्नुको कारण भ्रामक छ वा स्प्यामिंगको अभिप्रायले। हामीलाई थाहा छ यो विश्वास गर्न गाह्रो छ तर त्यहाँ लाखौं वेबसाईटहरू छन् जसले यस्ता प्रकारका स्पामिंग गर्दछन् केवल धोकादायक प्लेटफार्मको रूपमा कार्य गर्नको लागि असफल ईन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूबाट पैसा निकाल्ने पैसा। यसले चोरीलाई एसईओ लाई कसरी असर गर्छ भनेर जान्न महत्त्वपूर्ण बनाउँदछ।
शुरुवातकर्ताहरूको लागि, खोजी ईन्जिनहरूले शीर्षमा उत्तम सामग्री क्रम निर्धारणमा फोकस गर्दछ। यसको स्वाभाविक अर्थ भनेको सामग्री जुन क्वेरीसँग अत्यधिक प्रासंगिक छ (धेरै अन्य कारकहरूको साथ) शीर्षमा वर्गीकरण हुनेछ। जब तपाईं आफ्नो ब्लगमा लेख प्रकाशित गर्नुहुन्छ, तपाईं कुञ्जी शब्दहरूको सेटमा फोकस गर्नुहुन्छ र उनीहरूको वरिपरि सामग्री बनाउनुहुन्छ। यो प्रासंगिकता, डोमेन प्राधिकरण, लिंक प्रोफाइल, र सामाजिक सals्केतहरू जस्ता अन्य कारकहरूको साथ, धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
तर के हुन्छ यदि यस लेखको केहि अंश पुरानो लेखबाट उधारो लिइएको थियो जुन सर्च इन्जिनको सूचांकमा पहिले नै छ? यसले यसलाई कम महत्त्व दिईन्छ, अन्तत: रैंकिंगको लागि यसको विचारलाई प्रभाव पार्छ। यो तपाइँको वेबसाइट मा चोरी साहित्य प्रयोग सबैभन्दा ठूलो परिणाम हो। अन्य प्रभावहरू समावेश:
SERPs मा प्रतिकूल रैंकिंग
साइटव्यापी नक्कलले डोमेनको विश्वास र अधिकार लाई कम गर्न सक्छ
वेब भरमा न्यून दृश्यता
प्रतिलिपि गरिएको सामग्री धेरै प्रकारका हुनसक्दछ, त्यसैले सुरक्षित रहनका लागि ती सबै वेबसाईटबाट बाहिर निस्किनु उत्तम हुन्छ। यहाँ केहि धेरै सामान्य प्रकारका सामग्रीहरू छन् जुन सर्च इन्जिनहरूले श by्कास्पद मानिन्छ।
पातलो सामग्री (प्रति पृष्ठ केवल केहि वाक्यहरू)
स्वत: उत्पन्न सामग्री
Scraped सामग्री (अन्य वेबसाइटहरु बाट)
दोहोरिने सामग्री (सामाजिक प्रोफाइल, आदिबाट)
प्रयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न स्प्याम सामग्री
यी सबै तपाइँको वेबसाइट को अधिकार लाई प्रभाव पार्न र खोज ईन्जिनहरु मा यो विश्वास लाई असर गर्न सक्छ। जबकि नक्कल सामग्रीको ख्याल राख्नु भनेको सीधा हो - तपाईं अनौंठो सामग्री उत्पादनमा टाँसिनुहुन्छ - त्यहाँ अनुसरण गर्न केहि सिफारिश विधिहरू छन्। जब यसले सामग्री डुप्लिकेसनको कुरा आउँदछ यसले तपाईंको प्रतिस्पर्धाको एक कदम अगाडि रहन मद्दत गर्दछ।
नक्कल सामग्री मुद्दा कसरी सच्चाउने?
Semalt मा, हामीसँग सयौं सन्तुष्ट ग्राहकहरू छन् जसको लागि हामी विस्तृत SEO गर्छौं। हाम्रो प्रमुख प्रस्ताव को माध्यम बाट - AutoSEO र पूर्ण एसईओ - हामी गुगल, बिंग, र यान्डेक्स जस्ता खोज इञ्जिनहरूको पहिलो पृष्ठमा हाम्रो ग्राहकहरूको वेबसाइटहरू श्रेणीकरण गर्न सक्षम छौं।
हाम्रो प्रस्ताव को एक महत्वपूर्ण पक्ष को सामग्री निर्माण र व्यवस्थापन हो। हामी सबै i हरू लाई डट गर्छौं र सबै Q 'को क्रॉस गर्दछौं ताकि तपाईंको वेबसाइटमा प्रकाशित प्रत्येक वाक्य १००% अनौंठो छ। हामी डिप्लिकेसन मुद्दाहरुलाई रोक्न हामी व्यावसायिक उपकरणहरू जस्तै कोपिसकेप र घरभित्रका धेरै विधिहरू प्रयोग गर्दछौं यदि तिनीहरू पहिले नै हाम्रो ग्राहकहरूको पक्षमा अवस्थित छन् यदि तिनीहरू हाम्रो अघि आउँदछन्।
फिगर २ - चोरी चोरीबाट बच्न केहि राम्रो सल्लाह। छवि क्रेडिट: Harris Xiong फ्लिकर मार्फत
यहाँ उदाहरणका साथ चोरी साहित्यलाई व्यवहार गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी तरिकाहरू छन्।
यो नक्कल सामग्री को मुद्दा रोक्न को लागी एक सजिलो तरीका हो। यदि तपाईंसँग एक भन्दा बढि वेबसाइटहरू छन् भने क्यानोनिकल र HREFLANG ट्यागहरू थप्न मद्दत गर्न सक्दछ। यसले मार्केट/भूगोलको लागि सहि संस्करण प्रयोग गर्न खोज इञ्जिनहरूलाई संकेत गर्नेछ।
शीर्ष-स्तर डोमेनहरू प्रयोग गर्न पनि सिफारिस गरिन्छ। उदाहरण को लागी, तपाइँको अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइट को लागी '.com' प्रयोग गर्नुहोस् र देश भौगोलिक डोमेन प्रयोग गर्नुहोस् (जस्तै '.in' भारत को लागी र ग्रीस को लागी '.gr') फरक भौगोलिक लागि। यसले खोजी ईन्जिनको कामलाई सजिलो बनाउँदछ र तपाइँ अन्ततः राम्रा रैंकिंगबाट आनन्द लिनुहुन्छ।
दोहोरिने सामग्री हटाउनुहोस्
के तपाईं बीमा क्षेत्र मा हुनुहुन्छ? त्यसोभए हामी बुझ्दछौं कि तपाईले आफ्नो सामग्री टुक्रा पार गर्दा बोयलरप्लेट डिस्क्लेमर पाठहरू निर्दिष्ट गर्न आवश्यक पर्दछ। यसो गर्ने उत्तम तरिका भनेको अस्वीकरणहरूको लागि छुट्टै पृष्ठ बनाउनु हो। यस तरीकाले तपाईं केवल एक वा दुई टुक्रा उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ जुन त्यस पृष्ठमा लिंकसहित। गुगलले पनि सिफारिस गरेको हो।
समान सामग्रीबाट टाढा रहनुहोस्
यदि तपाईंसँग एउटा मात्र उत्पादन छ र यसलाई तपाईंको टुक्राहरूमा उल्लेख गर्न चाहनुहुन्छ भने, प्याराफ्रासि considerलाई विचार गर्नुहोस्। उही लाइनहरू प्रयोग गरेर उही कुरा गर्दा नक्कल मुद्दाहरू निम्त्याउन सक्छ। प्याराफ्रासिंग कोशिस गर्नुहोस् र शब्दहरु संग खेल्नुहोस् समान कुरा बिभिन्न तरिकाले भन्न।
एक DMCA अनुरोध फाइल गर्नुहोस्
यो प्राय: अन्तिम रिसोर्ट हो जहाँ तपाईं डिजिटल मिलेनियम प्रतिलिपि अधिकार ऐन (अमेरिका) बाट सहयोग खोज्नुहुन्छ। तिनीहरूलाई प्रदान गर्नुहोस् सबै विवरणहरू सम्भावित नक्कलको बारेमा र यसले वेबसाइटबाट कार्य गर्दछ जुन तपाईंबाट सामग्री प्रतिलिपि गर्दैछ। नोट गर्नुहोस् कि यो विधि मात्र प्रभावी छ यदि तपाईं अर्को वेबसाईटबाट प्रतिलिपि गरिएको सामग्री हटाउन सक्षम हुनुहुन्न।
यी बाहेक, यहाँ केहि अरू तरिकाहरू छन् जुन तपाईं साहित्य चोरी गर्न सक्नुहुन्छ:
1०१ रिडिरेक्शन प्रयोग गर्नुहोस्
लगातार युआरएल डिजाइन प्रयोग गर्नुहोस्
सिन्डिकेट केवल अद्वितीय सामग्री
खाली वा 4०4 पृष्ठहरू हटाउनुहोस्
धेरै जसो अवस्थाहरूमा, प्रतिलिपि गरिएको सामग्री हानिरहित हो यदि तपाईं एक गर्दै हुनुहुन्न भने। लक्ष्य राम्रो लेखकहरू भाडामा लिनु र अनुपम, उपयोगी, र उच्च-गुणवत्ता सामग्री सिर्जना गर्नु हो। र यो केवल वेबसाइटहरूमा सीमित छैन। तपाईंले प्लेटफर्महरूमा अद्वितीय सामग्री निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ, जसले तपाईंलाई नक्कल समस्यामा फस्नबाट बचाउँदछ तर साथै तपाईंको ब्रान्डको प्रतिष्ठा कायम गर्न मद्दत गर्दछ।
जब तपाईं प्रयोग गर्नुहुन्छ Semalt का सेवाहरु, तपाईंले नक्कलको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। हाम्रो सबै प्रीमियम एसईओ प्याकेजहरू १००% अनौंठो सामग्री उत्पादनको साथ आउँदछ, जसले तपाईंलाई अधिक महत्त्वपूर्ण चीजहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न दिन्छ जस्तै बिक्रीको पीछा गर्ने र तपाईंको ग्राहकहरूसँग संलग्न हुने। SEO को संसारमा सबै कुराको लागी तपाईसँग Semalt छ। हाम्रो केहि पढ्नुहोस् ग्राहक प्रशंसापत्र र आज हामीसंग सम्पर्कमा रहनुहोस्।